I-Ultrasonic Bioreactors for Fermentation - Hielscher Ultrasound Technology
I-Ultrasonics iyindlela ephumelelayo yokuvuselela ama-microorganisms ngama-vibrations angomakhenikha kanye ne-cavitation. Ku-sonobioreactor / i-Fermenter ye-sonobiore, ukwelashwa kwe-ultrasonic kwamangqamuzana nezicubu kuguquguquka kakhulu ngoba izici zezemvelo zinganqunywa ngokuqondile. Ngama-bioreactors e-ultrasonic, umphumela wokufutheka ungathuthukiswa kakhulu.
Ukusebenza kahle kokuvutshelwa kuncike ezimweni zenkambiso: Ama-nutrients, ubukhulu bomphakathi, izinga lokushisa, okuqukethwe kwe-oxygen / gas kanye nokucindezelwa yizinto ezibalulekile ezithonya umsebenzi we-microbial. Ama-microorganisms kanye namaseli omamamalia akhula kuphela ngaphansi kwezimo ezithile. Izimo ezifanele zihlangene nokuvuselela kwe-ultrasonic kungenza ngcono isivuno sokuvutshelwa.
Ukukhuthazwa kwe-Ultrasonic yezinyunyana
Ukuvuthwa kuyindlela yokwenza umzimba eguqula ushukela kuma-acids, gesi, noma utshwala. Kwenzeka emvubelo namabhaktheriya, futhi nakwamaseli e-muscle alambile, njengasendleleni yokuvutshelwa kwe-lactic acid. Ukuvuthwa kusetshenziselwa kabanzi ngokubanzi ukubhekisela ekukhuleni okunamandla kwamagciwane ezincane ezikhulayo, ngokuvamile ngenhloso yokukhiqiza umkhiqizo othile wamakhemikhali.
Inqubo yokuvuthwa yenziwa ngezinga lezimboni ngokusebenzisa ama-microorganisms njengama-bacteria ne-fungus for the fermentation. Imikhiqizo etholakalayo isetshenziselwa ukudla kanye nomkhakha jikelele. Amakhemikhali, njenge-acetic acid, i-citric acid, ne-ethanol akhiqizwa ngokuvutshelwa. Izinga lokuvutshelwa lithonywa ukuhlushwa kwamagciwane ezincane, amaseli, izingxenye zamaselula, kanye nama-enzyme kanye nokushisa, kanye ne-pH. Ukuvutshelwa kwe-aerobic, i-oxygen iyisici esibalulekile futhi. Cishe zonke izinhlobo ze-enzyme ezikhiqizwa kwezohwebo, njenge-lipase, i-invertase kanye ne-rennet, zenziwe ngokuvutshelwa nge-microbes eziguquguqukayo.
Ngokuvamile, ukuvutshelwa kungahlukaniswa zibe izinhlobo ezine:
Ukukhiqizwa kwe-biomass (okubonakalayo okusebenzayo kweselula)
Ukukhiqizwa kwemetabolite ye-extracellular (amakhemikhali amakhemikhali)
Ukukhiqizwa kwezingxenye ze-intracellular (ama-enzyme namanye amaprotheni)
Ukuguqulwa kwe-substrate (lapho i-substrate eguqulwe yikhona umkhiqizo)
I-homogenizer ye-ultrasonic I-UIP2000hdT (2kW) nge-batch reactionor
Sonication Ngaphambi, Ngesikhathi nangemva Fermentation
Ultrasonic Pre-treatment – Ukuthuthukiswa kokutholakala kwe-Biomass
I-Sonication njengokwelashwa kwangaphambili isetshenziselwa ukukhuthaza ukudluliselwa kwesisindo futhi yenze i-substrate itholakale kakhulu kumagciwane. Ukuxuba kwe-Ultrasonic kukhuthaza ukudluliselwa kwenqwaba yama-substrates ku, nemikhiqizo kude, namaseli amancane. Ukuqiniswa kwe-Ultrasonic kokudlulisa okuningi kungasetjenziswa njengokwelashwa kwangaphambili nangesikhathi se-Fermentation.
Isibonelo, ukwenziwa kwe-ultrasonic kwe-iray hull kwakusetshenziselwa ukuthuthukisa i-enzymatic hydrolysis yokuqanjwa kwe-xylooligosaccharides (XOs) ngu-Aspergillus japonicus (var. Japonicus CY6-1). Ngokukhiqizwa kwe-sonication, ukukhiqizwa kwama-enzymes we-cellulolytic kanye ne-xylanolytic kusuka ku-irayisi hurey kukhuliswe kakhulu. Isithelo se-hemicellulose sandiswa saya ku-1.4-fold ngaphansi kwe-sonication futhi isikhathi sokukhiqizwa sancishiswa kakhulu ukusuka ku-24 h kuye ku-1.5 h ku-80ºC – kanye nokunye okusemandleni okusebenza kwenqubo. I-biomass ene-sonicated kulula ukuguqula i-fungi ukuze kuqinisekiswe umsebenzi we-enzyme futhi umsebenzi we-CMCase, b-glucosidase, ne-xylanase ukwandiswa uma uqhathaniswa nehotela elingenalo i-rice. Imikhiqizo yokugcina fermentative yayiyi-xylotetraose, i-xylohexaose, nesisindo esiphezulu se-molecular mass xylooligosaccharides. Isivuno se-xylohexaose esivela ku-helmese irayisi yayineminyaka engu-80 ephezulu.
Ultrasonic Fermentation – Ukukhuthazwa Kwezinto Ezincane
Sonication ngokulawula kahle futhi ephindaphindiwe kusiza ekuthuthukiseni ukukhiqizwa kwezinqubo ezahlukene zokuvutshelwa ngaphandle kokulimaza amaseli. Ukuqina kwe-sonication kungashintshwa ngqo ezinhlobonhlobo zezilwane nezidingo zayo. Nge-sonication elawulwayo, ukukhula kwamaseli kanye nokusetshenziselwa umzimba kunomthelela omuhle futhi ukuguqulwa okubanjwe ngamaseli abukhoma kuthuthukiswa kakhulu, isib. Ukugqugquzela i-Bifidobacteria ebisi.
Eminye izinqubo zokuvutshelwa kwe-fungal, i-sonication isetshenziswa ngokuphumelelayo ukuguqula ukukhula kwe-morphology kanye ne-broth rheology ngaphandle kokuphazamisa izinga lokukhula kanye nokukhiqizwa kwefungi le-filamentous.
I-Ultrasonic Post-treatment – Ukukhipha
Ukukhiqizwa kwezingxenye ze-intracellular ezifana ne-microbial enzymes (isib. Catalase, amylase, protease, pectinase, glucose isomerase, cellulase, hemicellulase, lipase, lactase, streptokinase) namaphrotheni aphindaphindiwe isici, i-streptokinase), amaseli kufanele ahlaziye / aphazamiseke ngemva kwenqubo yokuvuthwa ukukhulula amaprotheni ayifunayo. Nge-sonication, ukukhishwa kwe-intracellular kanye ne-extracellular polysaccharide-protein complexes ezivela ku-viscous mycelial fermentation mhluzi. Ngaphandle kokukhiqizwa kwayo okuvelele kanye nokusebenza kahle, i-sonication isungulwe futhi inokwethenjelwa kwe-cell lysis kanye nokukhishwa kwendaba ye-intracellular.
Chofoza lapha ukuze ufunde mor mayelana lysis ultrasonic kanye isizinda!
Hielscher Ultrasonics yisikhathi eside ehlangene nezinqubo ultrasonically ezikhuthaziwe. Sinikeza izigameko eziningi ze-ultrasonic ezihlukahlukene nobukhulu be-geometri. Ngaphandle kwalokho, sinikeza izixazululo ezenziwe ngokwezifiso zokuhlanganiswa ku-bioreactor yakho ekhona. Njengoba amaprosesa ethu e-ultrasonic ahlukahlukene kakhulu futhi adinga isikhala esilinganiselwe kuphela, ukuphindaphinda kwezitshalo ezikhona ze-biotechnological kungenziwa ngaphandle kwezinkinga.
Ithebula elingezansi, libonisa izincomo zedivayisi jikelele ngokuya kwevolumu ye-batch noma izinga lokugeleza okufanele lisetshenziswe. Chofoza kuhlobo lwedivayisi ukuthola ulwazi oluthe xaxa kudivayisi ngayinye.
0.1 kuya ku-20L 0.2 kuya ku-4L / min I-UIP1000hdT, I-UIP2000hdT
I-Ultrasonicator I-UIP1000hdT for isizinda
N. Sainz Herrán, JL Casas López, JA Sánchez Pérez, Y. Chisti (2010): Umthelela we-ultrasound amplitude kanye nomjikelezo womsebenzi kwi-fungal morphology kanye nomhluzi we-mellow of Aspergillus terreus. I-World J Microbiol Biotechnol 2010, 26: 1409-1418.
N. Sainz Herrán, JL Casas López, JA Sánchez Pérez, Y. Chisti (2008): Imiphumela ye-ultrasound kumasiko we-Aspergillus terreus. J Chem Technol Biotechnol 2008, 83: 593-600./li>
CF Liu, WB Zhou (2010): Ukukhuthaza ukuvuthwa kwe-Bio-yogurt yi-High Intensity Ultrasound Processing.